Ahịa Twitter Faux Pas | Martech Zone
Monday, August 24, 2009 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 2, 2015 Adam Obere
Enwere otu onye a na Twitter onye na-agbaso ma soro m na ihe yiri ka ọ bụ kwa izu. Echere m na ọ kwenyere na m ga-eso ya na mberede (ebe ọ bụ na enweghị m oge 27 ikpeazụ ọ gbalịrị.). Ọ ga-echerịrị na m na-akpaghị aka na akaụntụ m ma ọ bụ na m bụ atụrụ ga-pịa -eso n'ahụ onye ọ bụla na-eso m.
Esoghị m ya azụ na nke mbụ oge n'ihi na m lere usoro iheomume ya anya wee hụghị ihe ọbụla baara m uru. Ọ bụghị na ọ na-ekwu ihe ọjọọ ọ bụla ma ọ bụ na ọ na-akpali porn. Enweghị m mmasị na ngwaahịa ọ na-agba, ọ nọghị n'ubi m, ọ naghị ekwu ihe ọ bụla m nwere mmasị na ya, ọ bụghịkwa mpaghara - njirisi niile m na-eji ekpebi ma m ga-eso mmadụ ma ọ bụ. (Ikwesighi iru njirisi niile; naanị otu.)
Enweghị m ọnụ ọgụgụ nnukwu agụụ na-eso, mana gịnị gịnị? Achọghị m nnukwu ọnụ ọgụgụ naanị n'ihi na ọ dị mma. Ka o sina dị, ruo ugbu a, elegharala m nwoke ahụ anya. N'ime atụmatụ niile nke ihe ọ bụ naanị obere mkpasu iwe dịka otu anwụnta ahụ gosipụtara na barbeque. Ma nke ahụ bụ ihe - M na-amalite ịhụ nwoke a dị ka ihe ọ bụla karịa anwụnta.
N'ezie, ọ bụ ya na-emebi ika ya soro otu onye o yiri ka ọ na-achọsi ike ọnyà. Mgbe na mbu ahuru m ya dika onye ahia ahia nke nwere ezigbo ahia nke na adighi amasi m, ugbu a ana m ahuta ya dika onye na-eri nta nke m na-agaghi agwa onye obula.
Ugbu a ka m gbagharịrị, ka m jụọ gị ajụjụ, ezigbo onye ọ na-agụ. Ọ bụrụ na ị gbalịsiri ike iji Twitter dị ka ihe eji eme ụlọ, olee omume ị kwenyere nwere ike imebi akara gị?
Mmelite: Tupu m nwee ohere ibipụta post a, onye ọrụ Twitter a jụrụ ajụjụ ga-ahụrịrị Tweets m na-agba ume banyere ya. Ọ na-egbochi me. Ana m ọchị ọchị.
Tags: omume ọjọọ twitternjehie twittertwitter soronjehie twitter
Ihe nkuzi ise na otu nnukwu ihe nzuzo na ngwa ngwa